Bacriminta kiimikada waxaa si dabiici ah looga soo saaraa walxaha aan dabiici ahayn, waa walax siisa cunno nafaqo u leh koritaanka dhirta iyadoo la adeegsanayo hababka jirka ama kiimikada
Nafaqooyinka Bacriminta Kiimikada
Bacriminta kiimikada waxay hodan ku tahay saddexda nafaqo ee lagama maarmaanka u ah koritaanka dhirta. Noocyada bacriminta ayaa ku jira noocyo waaweyn. Tusaalooyinka qaarkood ee bacriminta kiimikada waa ammonium sulphate, ammonium phosphate, ammonium nitrate, urea, ammonium chloride iwm.
Waa maxay Bacriminta NPK?
Xididdada dhirta ayaa nuugi kara bacriminta nitrogen. Nitrogen waa qaybta ugu weyn ee borotiinka (oo ay ku jiraan enzymes iyo coenzyme qaar), nucleic acid iyo phospholipids. Waa qaybo muhiim ah oo ka mid ah protoplasm, nukleus iyo biofilm, oo door gaar ah ku leh howlaha dhirta muhiimka u ah. Nitrogen waa qayb ka mid ah chlorophyll, sidaa darteed waxay xiriir dhow la leedahay sawir-qaadaha. Qaddarka nitrogen wuxuu si toos ah u saameyn doonaa qaybta unugyada iyo koritaanka. Sidaa darteed, keenista bacriminta nitrogen aad ayaa loogu baahan yahay. Urea, ammonium nitrate iyo ammonium sulfate ayaa badanaa loo isticmaalaa beeraha.
Izer Bacriminta fosfatka
Fosfoorku wuxuu kobcin karaa horumarka xididdada, ubaxa, iniinyaha iyo miraha. Fosfoorku wuxuu kaqeybqaataa habab kaladuwan oo dheef-shiid kiimikaad ah. Fosfoorku wuxuu hodan ku yahay meerisyada, kuwaas oo leh waxqabadyada nolosha ee ugu wax soo saar badan. Sidaa darteed, adeegsiga bacriminta P waxay saameyn wanaagsan ku leedahay beerta, laanta iyo koritaanka xididka. Fosfoorku wuxuu kor u qaadaa beddelaadda iyo gaadiidka karbohaydraytyada, isagoo awood u siinaya koritaanka miraha, xididdada iyo digriiga. Waxay si weyn u kordhin kartaa waxsoosaarka dalagyada.
Izer Bacriminta Potassic
Bacriminta Potassic waxaa loo isticmaalaa dardargelinta koritaanka jirida, dhaqdhaqaaqa biyaha iyo kor u qaadista ubax iyo midhaha. Kalibaaliumka (K) wuxuu ku jiraa qaabka ion ee dhirta, kaas oo xooga saara qaybaha ugu wax soo saarka badan ee nolosha geedka, sida barta koreysa, cambium iyo caleemaha, iwm .Botaasiyamku wuxuu kobciyaa isku-darka borotiinka, wuxuu sahlaa isu-socodka sokorta wuxuuna hubiyaa unugyada nuugista biyaha.
Faa'iidooyinka laga helo bacriminta kiimikada
Bacriminta kiimikada ah ee ka caawiya dhirta inay soo baxaan
Waxay ka kooban yihiin hal ama in ka badan oo ka mid ah nafaqooyinka koritaanka lagama maarmaanka u ah sida nitrogen, fosfooraska, iyo potassium iyo kuwa kale oo kala duwan. Markii lagu daro carrada, nafaqooyinkan waxay fuliyaan dalabaadka dhirta loo baahan yahay waxayna siisaa nafaqooyinka ay si dabiici ah uga maqnaayeen ama waxay ka caawisaa inay sii hayaan nafaqooyinka lumay. Bacriminta kiimikada waxay siisaa noocyo gaar ah oo NPK ah si loogu daaweeyo carrada iyo nafaqooyinka nafaqada lihi.
Bacriminta kiimikada ayaa ka raqiisan bacriminta dabiiciga ah
Bacriminta kiimikada waxay u egtahay inay ka qiimo jaban tahay bacriminta dabiiciga ah. Dhinac, marka laga eego geedi socodka soosaarida Bacriminta dabiiciga ah. Ma aha wax adag in la ogaado sababaha keenaya in bacriminta dabiiciga ahi ay qaali yihiin: baahida loo qabo in la soo goosto walxo dabiici ah oo loo isticmaalo bacriminta, iyo kharashyada badan ee ka imanaya in shahaado hay'ad dawladeed oo sharciyeysan lagu siiyo.
Dhinaca kale, Bacriminta kiimikada oo isu rogaya inay ka jaban tahay sababta oo ah waxay xiraan nafaqooyin badan halkii rodol oo miisaan ah, halka bacriminno badan oo dabiici ah looga baahan yahay isla heerka nafaqooyinka. Mid ayaa u baahan dhowr rodol oo bacrimin dabiici ah si loo bixiyo isla heerarka nafaqada ciidda oo hal rodol oo bacriminta kiimikada ah ay bixiso. Labadaas sababood ayaa si toos ah u saameeya isticmaalka bacriminta kiimikada iyo bacriminta dabiiciga ah. Warbixinnada qaar waxay soo jeedinayaan in Suuqa Bacriminta ee Mareykanka uu gaarayo $ 40 Bilyan oo bacriminta dabiiciga ah ay ku noolyihiin oo keliya illaa $ 60 Milyan. Inta soo hartay waa saamiga Bacriminta macmalka ah ee kaladuwan.
Bixinta nafaqo degdeg ah
Bixinta nafaqada degdegga ah iyo kharashka wax iibsiga oo hooseeya ayaa si weyn u faafiyay bacriminta aan caadiga ahayn. Bacriminta kiimikada waxay ku noqotay mid muhiim u ah beero, daarada iyo jardiinooyin badan, waxayna noqon kartaa qayb muhiim ah oo ka mid ah nidaamka daryeelka cawska oo caafimaad qaba. Si kastaba ha noqotee, miyay bacriminta kiimikada waxyeello u geysanaynin ciidda iyo dhirta? Miyaanay jirin waxyaabo u baahan in laga fiirsado dalabidda bacriminta kiimikada? Jawaabtu gabi ahaanba waa MAYA!
Saamaynta Deegaanka ee Adeegsiga Bacriminta Sintetikada
Wasakhaynta ilaha biyaha dhulka hoostiisa
Qaar ka mid ah xeryahooda isku-dhafan ee loo isticmaalo soosaarka Bacriminta kiimikada waxay yeelan karaan saameyn taban oo xagga deegaanka ah marka loo oggolaado inay u cararaan ilaha biyaha. Nitrogen-ka ku qulqulaya biyaha dusha sare ee dhul beereedka ayaa ka dhigan 51% howlaha aadanaha. Amooniyam nitrate iyo nitrate waa sunta ugu weyn ee wabiyada iyo harooyinka, taas oo keenta cuno qabateyn iyo wasakheynta biyaha dhulka.
Burburinta qaabdhismeedka carrada
Isticmaalka muddada-dheer iyo baaxadda ballaaran ee bacriminta kiimikada, arrimaha deegaanka qaarkood ayaa soo muuqan doona, sida aashitada ciidda iyo qolofka. Sababtoo ah isticmaalka tiro ka mid ah bacriminta nitrogen, halkii laga dhigi lahaa bacriminta dabiiciga ah, qaar ka mid ah dhul-beereedka kuleylka ah ayaa ku jira carro aad u daran, taasoo horseedaysa ugu dambeyntii luminta qiimaha beeraha. Saamaynta bacriminta kiimikada ee carrada waa mid weyn oo aan laga soo kaban karin.
Use Isticmaalka muddada-dheer ee bacriminta kiimikada ayaa beddeli kara carrada pH, carqaladeyn kartaa noolaha microbial-yada waxtar leh, kordhinaysa cayayaanka, iyo xitaa gacan ka geysashada sii deynta gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo.
Types Noocyo badan oo bacriminta aan dabiici ahayn waa kuwo aashito badan leh, taas oo iyaduna badiyaa kordhisa aashitada carrada, taas oo yaraynaysa noolaha waxtarka leh iyo koritaanka dhirta. Adoo ka careysiinaya nidaamkan dabiiciga ah, isticmaalka muddada-dheer ee bacriminta synthetic waxay ugu dambeyntii horseedi kartaa isku-dheelitir la'aanta kiimikada ee dhirta qaataha.
Applications Codsiyada soo noqnoqda waxay sababi karaan sun sun ah oo kiimikooyin ah sida arsenic, cadmium, iyo uranium oo ciidda ku jirta. Kiimikooyinkan sunta ahi waxay aakhirka u rogi karaan mirahaaga iyo khudraddaada.
Lahaanshaha aqoon macquul ah oo ku saabsan dalabidda bacriminta waxay ka fogaan kartaa qashinka aan loo baahnayn ee iibsashada Bacriminta iyo kordhinta dhalidda dalagga.
Doorashada bacriminta iyadoo loo eegayo astaamaha ciidda
Kahor iibsiga bacriminta, waxaa lagama maarmaan ah in si wanaagsan looga warqabo pH carrada. Haddii carradu cakiran tahay, waxaan kordhin karnaa isticmaalka bacriminta dabiiciga ah, haynta xakamaynta nitrogenous iyo sii ahaanshaha qadarka bacriminta fosfateerka.
Wada-isticmaalka bacriminta dabiiciga ah
Waa aasaaska beeraha inay adeegsadaan bacriminta dabiiciga ah iyo bacriminta kiimikada. Daraasaduhu waxay muujiyeen inay faa iido u leedahay cimilada dabiicigga ah. Iyada oo la adeegsanayo digada dabiiciga ah iyo bacriminta kiimikada, maadada dabiiciga ah ee carrada ayaa cusbooneysiineysa isla markaana la isweydaarsanayo awoodda isweydaarsiga qafiska ciidda, taas oo ka caawineysa hagaajinta waxqabadka enzyme carrada iyo kordhinta nuugista nafaqada. Waxay ka caawisaa hagaajinta tayada dalagga, kor u qaadista waxyaabaha ka kooban borotiinka, amino acids iyo nafaqooyinka kale, iyo in la yareeyo nitrate iyo nitrite oo ku jira khudradda iyo miraha.
Doorashada habka saxda ah ee bacriminta
Farsamooyinka bacrinta iyo xaaladaha deegaanka, maadadda amooniyamka ee khudaarta iyo dalagyada iyo noocyada nitrogen ee ciidda ayaa si dhow isugu dhow. isku-uruurinta sare ee nitrogen ee ciidda, ayaa waxa ku jira nitrate-ka badan ee ku jira khudradda, gaar ahaan muddada dambe. Sidaa darteed, codsiga bacriminta kiimikada waa inuu ahaadaa mid hore oo aan aad u badnayn. Bacriminta Nitrogenous kuma haboona faafinta, haddii kale waxay keeneysaa isbeddel ama khasaaro. Dhaqdhaqaaqa oo hooseeya awgood, bacriminta fosfateerka waa inay ku jirtaa meelayn qoto dheer.
Bacriminta kiimikada ayaa si weyn u jecel dhirta inay koraan, halka sidoo kale saameyn weyn ku yeeshaan deegaanka.
Waxaa jira halista sumowga biyaha dhulka hoostiisa iyo arrimaha deegaanka ee bacriminta kiimikada ay keento. Hubso inaad fahantay waxa dhabta ah ee ka dhacaya dhulka cagahaaga hoostiisa, si aad xulashadaada uga dhigto mid miyir qab ah.
Mabda'a adeegsiga bacriminta kiimikada
Iska yaree qadarka bacriminta kiimikada ee la adeegsado kuna dar bacriminta dabiiciga ah. Samee baaritaanka nafaqada iyadoo loo eegayo xaaladaha ciidda maxalliga ah kuna dalbo bacriminta iyadoo loo eegayo baahida dhabta ah.